Shiinaha Caruurtu Waxay Isticmaalaan Nadaafada Gacanta Warshad TECH-BIO iyo soosaarayaasha | Zhongrong
In ka badan 20 sano oo khibrad ah diiradda saar warshadaha jeermiska
Saamaynta covid-19, Gacanta Fayodhowrka nadaafadda jirka ayaa noqda baahida daryeela shaqsiyeed ee aan u qabno nolol maalmeedkeena gaar ahaan meelaha dadweynaha qaarkood sida dugsiga, isbitaalka, supermarket, hudheel, iwm. Badeecadani waxay ka kooban tahay 75% aalkolo oo dili kara coronavirus iyo jeermisyada kale si caafimaadkeenna waxtar badan u leh. Xirmada 30ml waxaa si gaar ah loogu talagalay carruurta inay isticmaalaan oo ay socon karaan qiyaastii nus bil, sidaa darteed waa u caafimaad carruurta. Markaan soo saarno aalkolo alaabta ceyriinka ah, qiimaheena waa mid la tartamaya tayo sare leh. Ka sokow, waxaan ka gudubnay CE, FDA, iyo xaqiijinta ISO. Waxaan bilaabaynaa sumadFarsamada-BIO in laga dhigo sumadda 1aad ee sumowga jeermiska ee Shiinaha maadaama aan haysano tayada ugu wanaagsan ee khamriga Shiinaha. Waxaan hogaamineynaa Shiinaha dhanka tikniyoolajiyadda ethanol. Waxaan haynaa qiyaastii 500,000 mitir laba jibaaran oo aqoon isweydaarsi ku yaal gobolka Hebei, Shiinaha. Shirkadeena waxaa la aasaasay sanadkii 1999. Sikastaba, waxaan sidoo kale aqbali karnaa OEM & ODM dhamaan noocyada nadaafada gacmaha. Rajeynaya inaad noqoto lammaanahaaga caalamiga ah oo aad buuxiso xaalad guuleysi ah!
Lagu sharfo sida mid ka mid ah shirkadaha Shiinaha ee Teknolojiyada Sare, ZhongRong Technology Corporation Ltd. (koodhka kaydka: 836455) wuxuu ku takhasusay dhinacyada bayoolaji, kiimikooyinka dawooyinka, kiimikooyinka wanaagsan iyo tamarta cusub. Iyada oo ku saleysan himilada "kor u qaadista horumarka bulshada ee waaraynta cusub", shirkaddu waxay xoogga saareysaa R&D, wax soo saarka iyo suuqgeynta ethanol iyada oo weligeed wax soo saarkeeda kore iyo kan hooseba ay soo jiideyso muddo ka badan labaatan sano, waxayna nafteeda u hureysaa inay noqoto iibiyaha ugu tartamada badan ee ethanol aan hadhuudh lahayn
Waxyaabaha firfircoon: Khamriga Ethyl 75% (V / V)
Ujeedo: Bakteeriyada lidka ku ah
Faa'iidooyinka: Ku saleysan aalkolada · Degaan ahaan Badbaado · Triclosan Waa Bilaash · Caafimaad qab
Use: Si loo caawiyo baabi'inta bakteeriyada maqaarka ku jirta ee sababi karta cudur iyo qoyaanka maqaarka.
Jihada: Lacag yar dul dhig gacanta kuna xoq ilaa aad ka qalajiso.
Digniinta: Isticmaalka dibedda oo keliya · Ololi kara · Ka fogow kuleylka iyo ololka ∙ Ka fogow taabashada indhaha iyo maqaarka jaban.
Waxyaabaha aan firfircooneyn: Biyaha la Daahiriyey, Carbopol, Khamriga Isopropyl, Triethanolamine
Macluumaad Kale: Waxaa lagu keydiyaa meel qalalan oo xiran.
Taariikhda uu dhacayo: 2 sano
Shaybaarka la tijaabiyey: 99.99% Wax ku ool ka ah jeermisyada ugu badan
Waxaa soo saaray Zhongrong Technology Corporation Ltd.
Ku dar: No. 1 Wadada Changqian, Degmada Fengrun, Magaalada Tangshan, Gobolka Hebei, Shiinaha
Nadiifiyaha noocan oo kale ah ayaa ku habboon carruurta maadaama aysan udgoon ku jirin karinta. Waxyeello iyo sun sun u lahayn carruurta. Xidhmada dhalada balaastigga ah waa mid tayo sare leh oo aan si fudud lagu jabin karin. Muga 30ml waa mid la qaadi karo oo ku habboon in la isticmaalo meel kasta oo aad jeermis ugu geyso carruurta. Waxay noqon doontaa xulashadaada saxda ah inaad ka ilaaliso caafimaadka carruurta meel ka fog jeermisyada ugu badan iyo iskuulka-19. Waxaan sidoo kale sameyn karnaa OEM & ODM si aan u habeynno mug kala duwan iyo naqshad xirmo leh astaanta macmiilka.
Hore: 50ml Gacmo Nadiifiyaha Jel TECH-BIO